Warbixin muujisay horumar laga sameeyay maamulka canshuuraha Kenya - Sabahionline.com
Warbixin muujisay horumar laga sameeyay maamulka canshuuraha Kenya
Daraasad uu Isniintii (7-da May) soo saaray Ururka Canshuur-bixiyayaasha Kenya ayaa lagu ogaaday in sare-u-qaadidda lagu sameeyay baaritaanka hay’adaha dawladda iyo maxkadayn dad looga shakiyay wax-is-daba-marin ay sababeen in ay hoos u dhacdo ku takri-faladdii lacagta.
Mas'uul hore oo Kenyan ah oo lagu helay fadeexadda Anglo-Leasing
Koox loo magacaabay in ay soo baarto musuqmaasuqii ka dhacay Dawladda Hoose ee Nairobi
Dibad-baxayaal sii daayay doofaarro si ay uu muujiyaan dareenkooda lacagta ay dalbanayaan sharci-dajiyayasha Kenya
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta daraasadda ayaa heshay in lacag gaaraysa 363 milyan oo shilinka Kenya ah ($4.3 milyan) la lunsday sannad-maaliyadeedkii 2009 iyo 2010-kii, sida uu sheegay wargayska Business Dialy Africa.
Ururka ayaa sameeyay sahan ay ka qayb-galeen 38 degmo-degaan, waxana lagu ogaaday in degmada Gatanga ay kaalinta ugu sarreeya ka gashay si habboon u-isticmaalidda Dhaqaalaha Horumarinta Degaanka iyo Dhaqaalaha Gargaarka Maamullada Maxalliga ah, iyada oo aan la arag wax muujinaya hanti si xun loo isticmaalay.
Degmada Wundanyi ayaa gashay kaalinta labaad, iyada oo gole degaan oo maxalli ahi lagu ammaanay in uu cod-bixiyayaasha u ogolaaday in ay doortaan xubnaha uga mid noqonaya Guddiga Dhaqaalaha Horumarinta Degaanka. “Danaha dhinacyada oo dhan waa la mataliyay, waana taas sababta noo sahashay wax-qabadka wanaagsan,” ayuu yiri Tohmas Mwadeghu oo ah xildhibaanka degmada Wundanyi sida uu ka soo xigtay wargayska Daily Nation-ta Kenya.
Degmada Bariga Markawet ayaa ahayd tii ugu shaqada xumayd iyada oo qiyaasta 50% Dhaqaalaha Horumarinta Degaanka si xun loo maamulay.